မန္တလေးဂေဇက် အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ၂၀၁၂ ဧပြီလ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » မန္တလေးဂေဇက် အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ၂၀၁၂ ဧပြီလ
မန္တလေးဂေဇက် အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ၂၀၁၂ ဧပြီလ
Posted by kai on Apr 11, 2012 in Editor's Notes, Ethnic Groups | 34 comments
တိုးသွားလိုက် ကျယ်လာလိုက်ဖြင့့်် မြန်မာလူမျိုးရေးအကြောင်းဆွေးနွေးကြ တိုက်တွန်းကြသည်ကို ကြားတွေ့နေရသည်။ ။ ၂၁ရာစုတွင် လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတို့သည် ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် တိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ဖြစ်တည်ခြင်းအတွက် ကြီးစွာသော အဟန်ု့အတားတို့ဖြစ်သည်ကိုကား သိသာနေကြမည်ထင်ပါသည်။
ယခုခေတ်တွင် မြန်မာတို့ကမ္ဘာအနှံ့ ဖြန့်ကျက်နေထိုင်နေကြကာ မြန်မာပြည်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်တို့တွင် နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သူ ကမ္ဘာတန်းအဆင့်ခေါင်းဆောင်ရောက်နေချိန်ဖြစ်သဖြင့် တိုင်းရင်းသား(၁၃၅)မျိုးနေထိုင်ပါသည်ဆိုသော ပြည်ထောင်စုအတွက် လူမျိုးရေးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အသင့်လျှော်ဆုံးအချိန်ဟု ဆိုချင်သည်။
မြန်မာတို့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သည် ဖြစ်ဖူးသည်တို့ကို လှမ်းကြည့်လျှင် ရှေ့ဆက်၍ဘာလုပ်သင့်ကြသည်ကို ထင်ရှား မြင်သာပါလိမ့်မည်။
ပုဂံခေတ်၏ ဆေးရေးပန်းချီများတွင် မှောင်သောအရောင်၊ ပြူးသောမျက်လုံး၊ ဖြူသောအရေ။ မှေးသောမျက်ဝန်းတို့နှင့် လူပုံများလည်း တွေ့ရပေသည်။
အာသံကိုမြန်မာတို့သိမ်းခဲ့သည်။ စစ်တကောင်း၊မဏိပူရလည်း ရဖူးပါသည်။ ထိုထိုဒေသမှ လူသားတို့ မြန်မာပြည်တွင်းဆီ ဥဒဟိုဝင်ထွက်သွားလာဖူးကြပါလိမ့်မည်။ သွေးနှောအမျိုးရောကြပါလိမ့်မည်။ သူတို့သည် မြန်မာ့ဘိုးဘေးတို့ဖြစ်ကြပါလေ၏။
၁၉-၂၀ရာစုတွင် အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းသား ချစ်တီးတို့လည်း မြန်မာ့မြေတွင်သွေးရောနေထိုင်ကာ လူမျိုးသွေးနှောအခြေချခဲ့ဖူးသည်။ မြန်မာတို့တွင် အိန္ဒိယတိုင်းသားတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုသာမက ဇာတိသွေးတို့ပင်ရောနေသည်ကို သိသာပါသည်။
၁၉၃၀ မေလ ၂၆ ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမား ပြဿနာမှစပြီး ကုလား-ဗမာအဓိကရုဏ်းဖြစ်သည်။
၁၉၃၈ ဇူလိုင်လ ၂၆ တွင် “မော်လ၀ီနှင့်ယောဂီ” စာအုပ်မှ အငြင်းပွားပြီး ကုလား-ဗမာအဓိကရုဏ်းဖြစ်သည်။
၁၉၈၈၏ နိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးမှုမှထွက်ပေါက်ရှာ အာရုံလွှဲသည့် ဘာသာရေးအခြေခံ အဓိကရုဏ်းများတို့သည် မြန်မာတို့၏ ဆွလွယ် ကြွလွယ်သည့် ဓလေ့အကျင့်တို့အသုံးချခံခဲ့ရသည်ဟု ထင်ဟပ်ပြနေပါလေသည်။
ပျူခေတ်အကြောင်းများကို ဂန္ဓာလရာဇ်(စိန့်)တိုင်းသား(Chinese)တို့၏ ရှေးမှတ်တမ်းများတွင် တွေ့ကြရသဖြင့် အိမ်နီးချင်းတို့နှင့်ဆက်ဆံရေးရှည်ကြာမှုကိုသိနိုင်ပါမည်။ အနော်ရထာမင်းစော(၁၀၁၄-၁၀၇၇)လက်ထက် လွန်ခဲ့သော နှစ် ၁၀၀၀ခန့်တွင် ပုဂံပြည်သည် ကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။ Sino-Indian ၏ ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းတခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စိန့်တိုင်းကုန်သည်တို့လည်းထွက်ဝင်သွားလာ လည်ပါတ်ရင်း ပျူ-မြန်မာတို့နှင့်အကြောင်းပါအခြေချသည်တို့ရှိမည်မှာ သေချာပါသည်။
နရသီဟပတေ့မင်းလက်ထက်(အေဒီ-၁၂၈၅)တွင်ကား ပုဂံကျခဲ့ပါ၏။ ၀င်ရောက်ကျုးကျော်ခဲ့သူများမှာ မွန်ဂို( ဂျင်ဂစ်ခန်၏မြေး ကူဗလိုင်ခန်)တပ်များဖြစ်ကြသည်။၊ သိန်းချီသော မွန်ဂိုတပ်ကြီး၏လက်ကျန် မွန်ဂိုလူမျိုးများ ဧရာဝတီမြစ်တလျှောက်တွင် ချန်ရစ်အချေချနေရစ်ခဲ့မည်မှာ သံသယရှိရန်မလိုပါ။
အင်္ဂလိပ်လက်ထက် ၁၉၃၁ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလ ၂ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်စကားများမှုမှစပြီး တရုတ်-ဗမာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။
၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် မော်စီတုံးရင်ထိုးတံဆိပ်ပြဿနာမှစပြီး တရုတ်-ဗမာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ခဲသေးသည်။
စီးပွားရေး နိုင်ငံရေးစနစ်တို့ကြောင့်တောက်လောင်ခဲ့သော လူမျိုးနွယ်တူတို့၏ မီးပွားစ ရန်ပွဲများအကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနှင့် တိုင်းရင်းသားများ( ပြည်တွင်းစစ်)
အင်္ဂလိပ်အထွက် ဂျပန်အ၀င်တွင်လည်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် ကရင်-ဗမာသတ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၉) ရက်နေ့တွင် ကရင်နီ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး၊၁၉၄၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက် နေ့တွင် မွန် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး၊ ၁၉၄၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကရင် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး၊ ၁၉၅၈ ခုနှစ် မေလ (၂၁) ရက်နေ့မတွင် သျှမ်း လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး၊ ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၅) ရက်နေ့တွင် ကချင်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး တို့ဖြင့် လွတ်လပ်ပြီးတိုင်းပြည်နုလေးဝယ် လူမျိုးပေါင်းစုံတို့၏ သိုးမည်းလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးများ ထပ်ခဲ့သည်။
ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှစ၍ အတူတကွစုစည်းထားနိုင်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကြီးများတို့သည် ဤမြေဤလေနှင့်အတူ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် နှစ်ထောင်ချီယှဉ်တွဲနေခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။
ဗမာ့နောက်ဆုံးကုန်းဘောင်မင်းဆက်အင်ပါယာတွင် ယခုတည်နေပြီးမြေပုံအတိုင်းပါဝင်ကြပါသော်လည်း အင်္ဂလိပ်တို့ လွတ်လပ်ရေးပေးပြီးနောက် တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ကလေး (ထုံးစံအတိုင်း) ကျန်ရစ်အောင်ထားခဲ့ကြသည်ဟု ကမ္ဘာ့သမိုင်းပြန်လှန်လျှင်မြင်နိုင်ပါမည်။
ပထမအင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်မှ ဆုံးရှုံးခဲ့သော မြန်မာပိုင်နယ်များအားထည့်တွက်ပါမူ အင်္ဂလိပ်လက်မှနယ်မြေတိုး၍ကားမရ လျှော့ကြေးနှင့်ပြန်ရခဲ့သည်ဟုသာ ဆိုဖွယ်ရာရှိပါမည်။
မြန်မာတို့ရသော မြေပုံသစ်သည် ရာဇ၀င်ဟောင်းမှချန်ရစ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်း ၁၃၅မျိုးတို့၏ ဘိုးဘွားအမွေဖြစ်တော့သည်။
ဗမာနှင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ တန်းတူညီမျှရှိရမည်။
အကယ်ဆိုမူ ဗမာသည်လည်း တိုင်းရင်းသားတမျိုးသာဖြစ်သည်မဟုတ်လော။
လူများသဖြင့် ရေများရေနိုင် မီးများမီးနိုင်ရန်အကြောင်းမရှိ။ တိုင်းပြည်လူဦးရေ၏ ၃ပုံ၂ပုံ မျှရှိနေသော ဗမာတိုင်းရင်းသားတို့သည် လူများစုဖြစ်သည်ဟူ၍ကား ကျန်လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများက ( ဒီမိုကရေစီစံနစ်အရ ) အသိအမှတ်ပြုကြရမည်။
“လူမျိုးရေး”ကို “အစွန်းရောက်”ကြရန်လည်းမသင့် “တွန်းချ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ရန်လည်း မလို”ပါ။
လူမျိုးရေးများအခြေခံကာ ပြောဆိုတိုက်ခိုက်နေကြခြင်းသည် ပြီးဆုံးနိုင်ခြင်းမရှိသော ပဋိပက္ခများကိုသာ မွေးပွားကြီးထွားစေလေသည်။
မြန်မာတို့၏သမိုင်းတလျှောက်တွင် “လွတ်လပ်ခြင်း ညီမျှခြင်း ချစ်ကြည်ခြင်း” လျှော့နည်းကင်းမဲ့ခဲ့သည်ကို တွေ့နိုင်လိမ့်မည်။
အမေရိကပြည်ထောင်စုတွင်နိုဝင်ဘာလကုန် (ကြာသပတေးနေ့)၌ ကျင်းပလေ့ရှိသည့် ကျေးဇူးတော်နေ့နှင့်သဘောတူနေ့ရက်မျိုးကို မြန်မာပြည်တွင်(တိုင်းရင်းသားများအပေါ်အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့်)နှစ်စဉ်သတ်မှတ်ကျင်းပသင့်သည်။
လူမျိုးရေးအနေဖြင့် ကွဲပြဲဆဲရဲမဲသဲကြရန် အချိန်ခေတ်ခါမဟုတ်တော့ပါသဖြင့် ၂၁ရာစုနှင့်အညီ မြန်မာပြည်တွင် Anti Discrimination ( လူမျိုးဘာသာခွဲခြားမှု နှိပ်ကွပ်ရေးဥပဒေ)ပြဌာန်းပြီး လူမျိုးရေးခွဲခြားကွဲပြားထိုးခွဲသူများကို ဥပဒေနှင့်အညီပြင်းထန်စွာအရေးယူသင့်ပါပြီဟု တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါကြောင်း။ ။
မှတ်ချက်။ ။ ဧပြီလ ၂၀၁၂ မန္တလေးဂေဇက်တွင် ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြထားသည်။
သဂျီး ထည့်မရေးတဲ့ အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းကို
ဟိုဘက်က ဆြာတွေ ထည့် အားဖြည့်ကြမှာ
အယ်ဒီတာ့ သင်ပုန်းဆိုတော့ ဒါက အယ်ဒီတာက အတည်ရေးတဲ့သဘော၊ အယ်ဒီတာ့ အာဘော်လို့ မှတ်ယူပါတယ်။
အချိန်အခါနဲ့ အလွန်လိုက်ဖက်တဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်ကြောင်း ဖါးလိုပါတယ်။ ;)
တကယ်တော့ ဗမာတိုင်းရင်းသားကလဲ နိုင်ငံလူဦးရေအားလုံးရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်။
ဦးနေ၀င်းခေတ်မှာ ဗမာဇွတ်လုပ်ခဲ့ကြရတာလဲ ရှိတာကိုး…။ ဒီလိုပဲ အခြားတိုင်းရင်းသားများမှာလဲ ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ကိုယ်သီးသန့်နေတာမဟုတ်လို့ ဒီကနေ့အချိန်မှာတော့ဖြင့် သွေးနှောပြီးတိုင်းရင်းသားများက ပိုတောင်များနေသလိုပါပဲ။ သို့သော် ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိရှိ အားလုံး တန်းတူရည်တူရှိဘို့က အဓိကပါပဲ။ လူဟာ လူချင်း တန်ဘိုးတူညီရပါမယ်။ အခွင့်အရေးတူညီရပါမယ်။ တာဝန်ဝတ္တရားလဲ တူညီရပါမယ်။
“လူမျိုးရေး”ကို “အစွန်းရောက်”ကြရန်လည်းမသင့် “တွန်းချ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ရန်လည်း မလို”….. ဆိုပေမယ့် တကယ်တော့ တိုင်းပြည်မှာ တညီတညွတ်တည်း စုစည်းနေထိုင်ချင်ရင် လူမျိုးရေးကို ရှေ့တန်းမတင်မှဖြစ်ပါမယ်။
တိုင်းရင်းသားစာပေဓလေ့ထုံးစံယဉ်ကျေးမှု့တွေကို ဖေါ်ထုတ်၊ ထိန်းသိမ်း၊ စောင့်ရှောက်ရမှာပါ။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး လူမှု့ရေးစတဲ့ လက်တွေ့ လူတိုင်းထိတွေ့နေရတဲ့ ကဏ္ဍတွေမှာတော့ အားလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားချည်းပဲဆိုတဲ့ စိတ်ခံယူချက်နဲ့မှာ တိုးတက်မှာ ရလာဒ်ကောင်းမှာပါ။
ကုလား-ဗမာအဓိကရုဏ်း / တရုတ်-ဗမာ အဓိကရုဏ်း စတဲ့ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း တွေဟာ
၁- ဥပဒေစိုးမိုးမှု့မရှိတာကို ပြတယ်
၂- တရားမျှတတဲ့ လူမှု့ဝန်းကျင်မရှိတာကို ပြတယ်
၃- လူတွေနဲ့ လူတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို စတေးပြီး – ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရေတိုနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းရအောင် လုပ်ရက်တဲ့ နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ကမ်းကုန်အောင် ယုတ်မာမှု့ကိုပြတယ်။
ကျန်တာတွေထား – ဘာသာတွေ ထုံးစံတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်-
တရားဥပဒေလဲစိုးမိုးမယ်၊ မျှတတဲ့ ဥပဒေတွေလဲရှိမယ်ဆိုရင်-
လူနဲ့ လူချင်း ဘာမှ မတည့်စရာမရှိ
ရိုးသားပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု့အောက်မှာ-
လူတွေနဲ့ လူတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို စတေးပြီး – ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရေတိုနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းရအောင် လုပ်ရက်တဲ့ နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ကမ်းကုန်အောင် ယုတ်မာမှု့ကိုပြတယ်။
အဲ့ဒီယုတ်မာမှု့ကို မမြင်ဘဲ ကြိုးဆွဲရာ ကကြတဲ့ အပိန်းတွေ လည်း များတယ်မဟုတ်လား … :grin:
ဦးကြီးမိုက် ရေ ဗယာကြော်တစ်ပွဲ သူကြီးကိုပေးပါဗျို့……….
တိုင်းရင်းသားတွေက ဗမာအပေါ်ထားတဲ့အမြင် ကို ကျမတို့ ငယ်ဘ၀တလျောက်လုံး ကြုံ ခဲ့ရဘူးပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်သူတွေက ဗမာတွေဖြစ်ကြပြီး အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ ဖိနှိပ်မှု ချုပ်ခြယ် မှုတွေကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေက ဗမာဆိုရင် အမြင်တမျိုးနဲ့မြင်တတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ တိုင်းရင်းသားတွေ တင် မကပါဘူး ဗမာတွေလည်းအတူတူခံရတာပါပဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အမြင် တွေကိုတည့်မတ်ပေးဖို့က သူတို့အပေါ်မှာ တရားမျှတတဲ့၊ သူတို့ ကလည်း လက်ခံနိုင်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး မျိုး ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ထိပ်ပိုင်း အစိုးရတင် မကပါဘူး၊ ပြည်နယ်တွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ စစ်တပ် အပါဝင် အစိုးရ ၀န်ထမ်း အားလုံး မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
မmochoရေ… ကျတော့အား အနည်းငယ် ဝင်ပြောခွင့်ပြုပါ…
အခု ကျတော့ မြင်နေရတာက လက်ရှိမှာ အစိုးရ အဖြစ်ယူထားတဲ့ အုပ်ချုပ်သူ ဗမာ လူတန်းစားတွေက ဗမာ မဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ်မှာ ဖိနှစ်ချုပ်ချယ် တာတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ လူတိုင်း ငြင်းနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး… အဲလို အရာတွေကို တိုင်းရင်းသားတွေက ခံရပါကြောင်းပြောတော အုပ်ချုပ်သူ မဟုတ်တဲ့ ဗမာတွေက သူတို့မှ မလုပ်ဘဲ ဗမာ က လုပ်တယ်ဆိုတော ခံပြင်းကြပြန်တယ်… ဒီလိုနဲ့ပဲအချင်းချင်း ကြားထဲ အမြင်တွေ လွဲနေခဲကြရတယ်…
အဖိနှစ်ခံ ဗမာ မဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းက သူတို့ဒေသက လွဲပြီး တခြားကို ကူးလူး သွားလာနေခြင်း မရှိသလောက် နည်းပါးကြပါတယ်… သူတို့ နေထိုင်ရာ ဒေသ တစ်ခုတည်းမှာပဲ နေကြတဲ့သူတွေ များပါတယ်… အဲလို သူတို့ နေထိုင်ရာ ဒေသကို အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားထဲက ဗမာ ဆိုတဲ့ အုပ်ချုပ်သူက ရောက်ရှိလာပြီး သူတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နေမူ့ကို အတားအဆီးပေါင်းစုံ ဖိနစ်မူ့ ပေါင်းစုံနဲ့ အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျခဲပြန်တယ်… နောက်တစ်ယောက် ပြောင်းပြန်တော နောက်တမျိုး ဒီလိုနဲ့ လာသမျှသော အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားတွေဟာ ဗမာတွေ ဖြစ်ကြတာကြောင့်… သူတို့ အတွက် တခြား အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား မဟုတ်တဲ့ ဗမာတွေနဲ့က အတွေ့အထိ အရမ်းနည်းပါးပါတယ်… ဒါကြောင်းလည်းပဲ သူတို့တွေဟာ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား ဗမာတွေကို မနှစ်မြိုတာပဲ ဖြစ်မှာပါ…
အမ အနေနဲ့ သူတို့ ဘာကြောင့် ဗမာ ဆိုတဲ့ လူမျိုး ကိုယ်စားပြု စကားကို သုံးပြီး မနှစ်မြို့ရတာလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်းကို အခုလို နားလည်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီဟာအတွက် အဖြေက ရှိပြီးသားပါ… အမပြောသလိုပါပဲ အုပ်ချုပ်မူ့ စနစ်ကို သူတို့လက်ထဲ အပ်လိုက်ပါ… လိုအပ်လို့ ဗမာ လူမျိုးမှ အုပ်ချုပ်ခဲသည် ရှိသော်လဲပဲ ဖိနစ်ချုပ်ချယ်ခြင်း ကင်းမဲ့ပြီး ကိုယ့်သွေးရင်း ညီကိုလို သဘောထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်…
မသိတာလေးတွေကို သိရှိခဲ့ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခုလို ဖော်ပြပေးမှပဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်ဗျာ …….
ဗမာနှင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ တန်းတူညီမျှရှိရမည်။
လူများသဖြင့် ရေများရေနိုင် မီးများမီးနိုင်ရန်အကြောင်းမရှိ။ တိုင်းပြည်လူဦးရေ၏ ၃ပုံ၂ပုံ မျှရှိနေသော
ဗမာတိုင်းရင်းသားတို့သည် လူများစုဖြစ်သည်ဟူ၍ကား ကျန်လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများက ( ဒီမိုကရေစီစံနစ်အရ )
အသိအမှတ်ပြုကြရမည်။“လူမျိုးရေး”ကို “အစွန်းရောက်”ကြရန်လည်းမသင့် “တွန်းချ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ရန်လည်း မလို”ပါ။
ဒီရွာထဲက မွန်ဗမာ ဇာတ်ထုပ်ပြဿနာကိုတော့
သြစတေးလျှ က မြန်မာသဘုန် ဘုန်းကျော် ဆိုတဲ့လူက
သဂျီးမင်းရဲ့ ( ဥ ) ပဒေ စည်းကမ်းတော်မြတ် အမှတ် ( ၆ ) ကို မလိမ့်ဒဘတ်နဲ့ချိုးဖေါက်ဒါဘာ
အောင်ဇေယျဆိုတဲ့ နယ်ချဲ့ကိုလိုနီကောင်ရဲ့ အလယ်ချောင်းကို ထိုင်းတွေကိုးကွယ်တဲ့အကြောင်းကို
သူကြားဘူးတဲ့ ပါးစပ်ရာဇဝင်အကြောင်း ( သူ့ကြားဖူးနားဝ ) သူပြောပြရာကနေ
အောင်ဇေယျ မယားပါသားတွေက သူတို့ အဘ
အကြောင်းတွေကို သူတို့အဘတွေရဲ့ ကိုယ်တွေ့ပြောပြတဲ့အတိုင်း ဖေါက်သည်ပြန်ချကြရာကနေ
သြစတေးလျှနေ မြန်မာသဘုံ ဘုံးကျော် ကို သဂျီးမင်းတရားကြီး၏ ဥ
ပဒေ အမှတ် ( ၆ ) ကို လက်တစ်လုံးခြားပြုမှု့ဖြင့် အရေးယူပါ သဂျီးမင်းခင်ဗျ။
( ခင်ဗျားတို့ဟာတွေကလည်း သူများကိုကြတော့ လူမျိုးရေးသဘောကြီးကြပါ ဘာညာ
ပါးစပ်အမြုပ်ထအောင် ပြောပြီး ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်က လူမျိုးစုတစ်ခုကို
ရှေ့တန်းတင်ပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ သမိုင်းတွေကို အသက်သွင်းနေတာလေး
အနှီး အောင်ဇေယျ ဆိုတဲ့ သတ္တဝါရဲ့ ရုပက်တုနေရာမှာ
ဟုတ်ကဲ့ပါ မာမီပု ။ သတိချပ်သင့်ပါတယ်။
သူကြီးရဲ့ နှစ်သစ် ဆန္ဒအတိုင်း ” လွတ်လပ်ခြင်း ညီမျှခြင်း ချစ်ကြည်ခြင်း ” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို တကယ် အသက်သွင်းနိုင်မဲ့ သမိုင်းအသစ်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဒီနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ဆန္ဒ ရှိပါတယ်။
နောက် Anti Discrimination ( လူမျိုးဘာသာခွဲခြားမှု နှိပ်ကွပ်ရေးဥပဒေ)ပြဌာန်းပြီး လူမျိုးရေးခွဲခြားကွဲပြားထိုးခွဲသူများကို အရေးယူပေးနိုင်မဲ့ ဥပဒေ ပေါ်လာစေဖို့လည်း တတပ်တအား ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။
ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်ရမယ်ဆိုရင်လေ… အလွှာ အားလုံး တန်းတူဖြစ်ရပါလို၏ပါပဲ။ ဥပဒေက အဟောင်းလား အသစ်လားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါပဲ။
ပြီးတော့ ပါးစပ်က ဒီမိုကရေစီဆိုပြီး တဖွဖွ အော်နေကြတာပဲ..ဟာဂျီးကို
ဖြူတာမဲတာ..၀ဲတာပီတာ လုပ်မနေကြပဲ အတူတူ တန်းတူညီမျှ ရှေ့ ဆက်သွားကြတာကောင်းပါမယ်..
ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် လာထားတစ်ဆယ်
ကြက်ဖင် ( အကယ်ဒမီ ) နော် ကုလားဘဲ
ကုလား ကြက်ဖင် ( အကယ်ဒမီ ) နော် အသားမဲတယ် အထင်မသေးနဲ့ အသဲစွဲသွားမယ်
ကုလား ကြက်ဖင် ( အကယ်ဒမီ ) နဲ့ပေါင်းကြည့် အကြောင်းသိသွားမယ်
ကုလား ကြက်ဖင် ( အကယ်ဒမီ ) နော် လူသားတိုင်းကိုချစ်တယ် အပျိုကြီးတွေကို ပိုချစ်တယ်
ကုလား ကြက်ဖင် ( အကယ်ဒမီ ) တောင်းဆိုပါတယ်
လွှတ်တော်ထဲမှာနော် ကလားလို နှုတ်ဆက်ကြပါ
“ရဟီးဆပ် မားသလူး “
အားရေး …..ကိုးးးးးဆားမီး နဲ ကိုးးးးးဂျက်ဖင်..
အလာ ဗားကရာချောက် အပြန် ဟာမစ်တစ်ကုန်းဆင်း….
ဒါပေမယ့်အမျိုးစစ်မှအမျိုးချစ်မှာတော့သေချာတယ်…. သွေးနှောတာများရင်လူမျိုးပျောက်မှာလည်း စဉ်းစားရမယ်…. ဒါပေမယ့်မျိုးနွယ်စုတစ်စုထဲကလူမျိုးစုတစ်စုစီက ခွဲထွက်နေတာမျိုးကိုလည်းမလိုလားပါဘူး…ဥပမာ….မွန်လူမျိုးတစ်ဦးက…တနင်္သာရီသည်အရင်တည်းက
မြန်မာပိုင်နယ်မြေလို့ဆိုခဲ့တာကို..ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်မွန်လူမျိုးဖြစ်တာရှက်မိတယ် ဆိုပြီးပြောခဲ့တာကို ဘဖောပို့စ်မှာမြင်ခဲ့ပါတယ်…အကြောင်းကအရင်ကတနင်္သာရီကိုမွန်လူမျိုးတွေပိုင်ခဲ့လို့ပါတဲ့…
ပါလားဗျာ…. နွားကွဲမှတော့ကျားဆွဲခံရတော့မပေါ့… စောစောကတည်းကအမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း..
မိမိမျိုးနွယ်စုဂုဏ်ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်ဆိုရင် … လူမျိုးရေးလူမျိုးရေးဆိုပြီးအော်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးဗျာ..
ကိုယ်ချင်းကိုယ်ချင်းမတည့်တော့ ရရာလက်နက်စွဲကိုင်တယ်ဆိုတာတွေဖြစ်တော့တယ်… ဒီနေရာမှာလဲ..
လူမျိုးရေးခွဲခြားနေဖို့..သွေးကြီးနေဖို့မလိုပါဘူး… ဆန်ကိုဆန်သက်သက်ချက်ပြီး ကောက်ညှင်းကိုကောက်
သွေးကိုထိန်းသိမ်းပါ…အမျိုးကိုချစ်တတ်ပါ…. ခွဲခြားနေဖို့မလိုပါဘူး… တာဝန်သိစိတ်တွေနဲ့…
ဟုတ်လိုက်လေ.. ဟုတ်လိုက်.. ဟုတ်လိုက်လေ..
သူကြီးပြန်လည်တူးဆွတာကို လက်ရှိနဲ့ ထင်ဟပ်ပြီး..
လူကြီးတွေ ဘာဆက်ပြောမလဲ ဆိုတာလေးတော့
ကျတော် လေ့လာ မှတ်သားဖူးသလောက်ဆိုရင်တော မြန်မာပြည် တိုင်းရင်းသား အရေးကို ဖြေရှင်းရန်မှာ အခက်အခဲကြီး မဟုတ်ပါဘူး… ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု စနစ်ကိုသာ လက်တွေ့ ကျင့်သုံးလိုက်ပါ။ တိုင်းပြည် တိုးတက်ပြီး ကမ္ဘာမှာ နေချင်စရာ အကောင်းဆုံး နေရာ ဖြစ်လာနိုင်မှာပါ…
ခက်နေတာက အုပ်ချုပ်သူ ဗမာ အသိုင်းအဝိုင်းက အာဏာကို လက်မလွတ်လိုတာရေ… မြေပေါ် မြေအောက်၊ အေပေါ်ရေအောက် သယံဇာတတွေအများစုက ဗမာမဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်တွေမှာ ရှိနေတာရေ၊ တိုင်းရင်းသား ယဉ်ကျေးမူ့တွေ ထွန်းကားလာရင် ဗမာ ယဉ်ကျေးမူ့ မှေးမှိန်မှာ စိုးမိတာတွေရေ စသည့် အမျိုးချစ်တဲ့စိတ်ပြင်းပြခြင်းတွေက တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်မူ့ကို ပျက်ပြားနေခြင်းလို့မြင်ပါတယ်…
အမှန်က ဒါဟာလဲ ကောင်းသော အမျိုးချစ်ခြင်းပါပဲ သို့သော်လဲ စိုးရိမ်စိတ် မလွန်ကဲဘဲ တိုင်းရင်းသားတွေကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးပြီး ညီကိုချင်း စည်းလုံးကြမယ်ဆို၇င် ဘယ်လောက် သယံဇာတ ခေါင်းပါးပါစေ၊ စီးပွားရေး လုပ်ရန် ခက်ခဲပါစေ အဲဒီ ဒေသဟာလဲ တပြေးညီ တိုးတက်တဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်လာနိုင်မှာပါ….
ပြောရဦးမယ် သဂျီး ..ရေ..
မနေ့ညနေက သတင်းလေးပါ.. ၂၀၁၂၊၀၄၊၁၁
အချုပ်ပြောရရင်ဖြင့် ANA ကနေ ရန်ကုန် နာလိတာ တိုက်ရိုက် ဖလိုက် ပြေးဆွဲဖို့ လုပ်နေပါသတဲ့…
တပါတ် ကို ၃-၄ခေါက် ပြေးမလား နေ့စဉ် ပုံမှန် ပြေးမလားတော့ ချိန်ဆနေတုန်းပါတဲ့ …
ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ အတူ ဘစ်ဇနက်စ်တွေ ပြောင်းရွှေ့ အခြေချ လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်
ဘန်ဂေါက် ဒါမှမဟုတ် သီဟပူရ ကနေ transit နဲ့ ကျုပ်တို့ရွာကြီးဆီ သွားရောက်လေ့လာနေကြတဲ့
သူတို့ ဂငယ်တွေ အတော်ပေါလာတဲ့အချိန်အခါ နဲ့ ကိုက်ညှိပြီး ဒီအစီအစဉ်ကို
မီးတွေ ရေတွေ အင်တာနက်တွေ အင်ဖရာတွေ …
ဘာပြင်ထားသလဲ မောင်ရေခဲ ….
ထိုင်စားယိုင်သွား နေလေဆဲ ။ ။ :?
လူနဲ့ကြောင်နဲ့ စပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်။ လူအသိညဏ်နဲ့ ကြောင်လို ပေါ့ပါးလျင်မြန် သွက်လက် လှုပ်ရှားနိုင်မယ်။ တရုတ် ကုလား ဗမာ လူမျိုးအစွဲ မရှိတော့လို့ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခလည်း မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒေါ့ ဘယ်သူနဲ့စပြီး ကြောင်ကြီး မျိုးစပ်သင့်သလဲ… အကျမ်ပေးဂျဘာ…။
အဲဒါ လက်တွေ့အနေနဲ့ တော်တော်ငြင်းခုန်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့
“ကြောင်ဟင်ဂျာ” တွေဖြစ်သွားရင် တရန်အေးတာပေါ့….
ခုလေးတင်.. အပြင်ထွက်တော့.. ရေဒီယိုဖွင့်တာ.. ကြားလိုက်လို့.. ကြိုက်လို့… ကူးတင်ပေးလိုက်တာ…
“Secondly, I just want to speak from my heart to your heart becauseaheart has no color—it’s not black, it’s not white, it’s red and I want to say thank you from my heart to you heart,” Fulton went on to say.
အရောင်မကွဲ.. လူမျိုးမကွဲ.. ဘာသာမခြား..
နှလုံးအစားထိုးကုမလား.. လူမျိုးမကွဲ… တူတူပဲ..လဲလှယ်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်..
ဘက်နတွန် က လုပ်စားသွားတဲ့ အကွက်ကလေး ..
သများတို့ရွာလည်း ယူနိုက်တက်ကာလာ ဘိရုမာ လုပ်သင့်ဘီ
သူကြီးရေ ပြောသွားတာတွေကကောင်းပါပေတယ်။ ကျနော်ပြောဖို့တောင် တချို့ဟာတွေက မလိုတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီဂေဇက်လူမျိုးအရှုပ်တော်ပုံလို့ ဆိုရလောက်အောင်တော့ စဖြစ်စေတဲ့ စကားလုံး ကြမ်းကြမ်းတွေကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်။ တချို့လည်း တော်တော်ရိုင်းတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်အားလုံး မျှတအောင်တော့ ကြိုးစားကြည့် အုံးမယ်။
ပုံနှိပ်သတင်းစာကို.. ရန်ကုန်က အမေရိကန်စင်တာလည်း ပို့ပါဦးမယ်..။
ဒေါင်းပြီးပြီ ဖွင့်လို့မရဘူး သူကြီး ရှိစေတော့
အရင်တခါဟာလည်း ဖွင့်မရပါ။ ကြုံတဲ့အခါပေါ့။
သူကြီး.ရဲ့ နှစ်သစ် ဆန္ဒ..အတိုင်..ပြည့်စေချင်ပါရဲ့ ဗျာ..။
အခုဖြစ်နေတဲ့.. မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်ကမ်းခြေအရေးအခင်းကို.. ထင်ဟပ်စေတဲ့.. အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်းကို.. လွန်ခဲ့တဲ့.. ၂လနီးပါးက.. ကြိုမှန်းဆရေးခဲ့တယ်..